“ရွှေမြန်မာ”: ရေငတ်နေတဲ့ သူတွေကို ရေတိုက်ကြရအောင်
moestar said... @ 20 May 2010 at 10:35
ဒီနှစ်မှာတော့ အပူချိန်ပြင်းတဲ့နေ့တွေက ဆက်တိုက်များသွားတော့ ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေ နေရာတော်တော်များများမှာ ကြုံရတယ်။ ခုအချိန်မှာတော့ လိုင်လာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အဆင်ပြေကုန်ကျပြီထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခုလိုအပူချိန်သာ တလလောက်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် မတွေးရဲစရာခင်ဗျ။ နောက်နှစ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမယ့် သေချာတာက ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာတွေလုပ်မလဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ ခုကတည်းကစထားသင့်ပြီ။ ဒေသအသီးသီးက လူတွေ ခုအဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူသင့်ပြီ။ ဆက်ဖြစ်လို့ ဆက်ခံရရင် ရာသီဥတုကို အပြစ်မတင်သင့်တော့ဘူး။ ကိုယ်ညံ့တာဖြစ်သွားပြီ။
နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်က အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ ဆိုတာပါပဲ။
moestar said... @ 20 May 2010 at 11:06
အေးဗျာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကတော့ ဒီနှစ်မှာနေရာအနှံ့ဖြစ်သွားခဲ့တာပဲ။
ခုချိန်မှာတော့ လိုင်လာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေကုန်လောက်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုအပူချိန်နဲ့ နောက်ထပ်တလလောက်များ ဆက်ပြီးသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မတွေးရဲစရာပါ။
အဲဒီတော့ ဒီနှစ်နွေရာသီကတော့ သင်ခန်းစာပေးသွားပါပြီ။
နောက်နှစ်တွေမှာ ဒီလိုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေစတင်သင့်ပြီ။ လူတွေရဲ့စိတ်တွေလည်း ရာသီဥတုအကြောင်း သဘ၀ကပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေအရ တော်တော်သိသွားကြကုန်ပြီထင်ပါတယ်။
တယောက်အားဖြင့်ယူသော်မရ တစ်သောင်းအားဖြင့်ယူသော်ရ ဆိုသလို တစ်ပိုင်တနိုင် လေး စတင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို စတင်လုပ်ထားရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ထားရအောင် ။ ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာကတော့
1. သောက်ရေကန်တွေ ကို ဒီထက်ပိုနက်အောင် တူးထားသင့်ပြီ
2. နောက်နေတဲ့ရေတွေကို သောက်သုံးလို့ရတဲ့အဆင့်ထိ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေကို ဒေသအလိုက် စမ်းသပ်ထားသင့်ပြီ
3.ရေချိုထွက်နိုင်တဲ့အရေးပေါ် အ၀ီစိတွင်းတွေ တူးထားသင့်ပြီ